China Patch / Pieces suede mittens vita amin'ny volon'ondry vita amin'ny volon'ondry mpamokatra sy mpamatsy | Fanshen
Patch / Pieces suede mittens vita amin'ny volon'ondry dia misy volon'ondry vita amin'ny volony
Vita amin'ny hoditr'ondry sombin-javatra, Ireto avy ireo fitaovana sisa tavela avy amin'ny firakotra hoditr'ondry, mora vidy tokoa izy io. Namboarina sy namboarina tsara toy ny fonon-dranomaso vita amin'ny vodin-dranomasina iray manontolo, tonga lafatra amin'ny fampiasan'ny toetr'andro, asa, isan'andro sy hatsiaka.
• Andininy laharana: PM-002
• hoditr'ondry tena 100%
• Fehezam-bolo vita amin'ny volon'ondry
• Loko: loko mifangaro
• Sasao madio
• Efatra habe, vehivavy S / 8 M / 9 avy any ankilany, lehilahy L / 9 XL / 10, lehilahy lehibe namboarina no raisina
Previous: Patch / Pièce suète mittens hoditra
Manaraka: Patch suète mittens hoditra
MILDSHEEP naorina tamin'ny 2002, raha atrikasa tanana izy io. Efa niasa sy nanjaitra asa ho an'ny mpivarotra iraisam-pirenena izahay hatramin'ny taona 2012, nanomboka nivarotra fonon-tànana ho an'ny mpividy iraisam-pirenena izahay. Ary ankehitriny, manana endrika matihanina manokana izahay, mamokatra, mivarotra sy ekipa QC, Ny fonon-tànantsika, baoty zazakely ary satroka dia efa amidy tany Canada, Alemana, UK ary firenena maro hafa. Manatrika fampirantiana iraisam-pirenena marobe isan-taona koa izahay, ohatra, MIPEL, MIFUR any milano, APLF any Hong Kong. Fantatray ireo fehezan-dalàna sy lalàna mifehy ny varotra iraisam-pirenena isan-karazany, Fantatra koa ny fizotran'ny fanondranana, Ka, Na inona na inona fanontaniana, Aza misalasala mampahafantatra anay! Hiezaka mafy izahay hanampy!
1, Tombony toerana, ny orinasako dia ao amin'ny faritanin'i Hebei, mila adiny 3-4 eo ho eo mankany amin'ny seranan-tsambo any Beijing. Manodidina ny 5-6 ora mankany amin'ny seranan-tsambo any Tianjin amin'ny fiara, mety be amin'ny fandefasana azy io. Ary Hebei Provinc koa dia toby indostrialy ho an'ny famokarana hoditra ondry any Shina. Tanànan'ny renivohitra Xinji hoditra sy tanàna volom-borona Daying, dia ao amin'ny Faritanin'i Hebei avokoa.
2. Fahaiza-manao famokarana lehibe Famatsiana maharitra. Araka ny fepetra takian'ny mpanjifa, manohana ny fonosana namboarina izahay.
3.QC.Mihoatra ny tem taona niainany ny fanondranana, ny orinasanay dia manana rafitra feno setroka QC. Ny ekipanay QC dia hijery ny fividianana fitaovana, ny famokarana, ny famonosana ny dingana rehetra. Ataovy azo antoka fa ambany noho ny 0,1% ny tahan'ny kilema.
Ekipa mpanao sambo vita tanana vita tanana, ny fonon-tànantsika hoditr'ondry rehetra dia natsofoka tamin'ny fanjairana fanao isaky ny zaitra avy eo amin'ny zaitra .ary tsy maintsy vitan'ny mpanao asa tanana mahay manana traikefa mihoatra ny 10 taona, ary ihany koa ho an'ny fonon-tànana vita amin'ny hoditra. Soa ihany fa manana tànana ekipa toy izao!
1. Rahoviana aho no mahazo ny vidiny?
Matetika izahay dia mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fanontanianao. Raha maika ny hahazo ny vidiny ianao, azafady miantso anay na lazao anay amin'ny mailakao fa hoheverinay ho laharam-pahamehana ny fanontanianao.
2.Fomba ahoana no ahazoako santionany hijerena ny kalitao?
Aorian'ny fanamafisana ny vidiny dia azonao atao ny mangataka santionany hijerena ny kalitaonay. Raha mila santionany fotsiny ianao hijerena ny volavola sy ny kalitaony, dia hanome anao santionany maimaimpoana izahay, raha mbola azonao ny entana mazava. Matetika, ny santionany dia ho vonona amin'ny fandefasana ao anatin'ny 1 herinandro. Ary izy santionany dia halefa aminao amin'ny alàlan'ny express ary tonga amin'ny 3-5 andro fiasana.
3.Inona ny fe-potoana alefanao?
Manaiky ny FOB, CIF isika izao.
4.Ahoana ny fotoana itarihana ny famokarana betsaka?
Matetika, aorian'ny fanamafisana ny baiko, 60-90 andro amin'ny vanim-potoana be atao, 30-60 andro amin'ny vanim-potoana tsy fiasana. Saingy, raha baiko kely dia mila 2-3 herinandro.
Andriambavy kilasika manety manety rantsan-tànana Mit ...
Sombin-dambam-bolo vita amin'ny suède / patch suède ...
Patch / Pièce suète mittens hoditra
lamaody lava Tompokovavy handstitiched Merino hoditr'ondry ...
Fonon-tànana Merino fonon-tànana manety fonon-tanana
Saron-tànana vita amin'ny hoditr'ondry vita tanana vita amin'ny tanany ...